Wafdi ka socda DDSI oo Maanta kulan la qaatay Madaxweyne ku xigeenka Puntland+Sawiro – SBC
Wafdi ka socda DDSI oo Maanta kulan la qaatay Madaxweyne ku xigeenka Puntland+Sawiro
Posted by Webmaster on July 2, 2013 Comments
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna ku simaha Madaxweynaha oo safar dibadda ah ku maqan C/samad Cali Shire ayaa maanta ku qaabilay xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe wafdi balaaran oo gelinkii dambe ee shalay soo gaaray Magaalada Garoowe.
Wafdiga Balaaran ee la kulmay Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa waxa ay ka socdaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana ay isugu jiraan wasiiro iyo salaadiin kala duwan.
Kulanka dhexmaray madaxweynaha iyo wafdigan ayaa ahaa mid soo dhaweyneed waxaana la isula soo hadal qaaday dhinacyo kala duwan oo ay ugu weyneed wada shaqeynta labada dhinac iyo xoojinta heshiis Jig jiga ku dhexmara madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole iyo Madaxweynaha dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud .
Dhageyso hadal uu saxaafada siiyay Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo uu ku soo dhaweynayo wafdigan.RIIX AMA DAAR
Wasiir ka tirsan wafdiga Dowlad deegaanka Itooba islamarkaana hogaaminayay wafdiga ayaa isna ka sheegay goobtaas sida ay ugu faraxsan yihiin imaanshaha Puntland, iyo sida weyn ee ay puntland ugu soo dhoweysay caasimada .
Sikasataba ha ahaatee waxa ay noqoneysaa markii ugu horeysay oo wafdi ceynkan oo kale ah oo ka socda Dowlad deegaanka Soomaaliya uu yimaado Garoowe.